Jahwareerinta Dhalinyarada Amni uma keenayso Soomaaliya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Jahwareerinta Dhalinyarada Amni uma keenayso Soomaaliya
Jahwareerinta Dhalinyarada Amni uma keenayso Soomaaliya
President Mohamed Abdullahi Farmaajo speaking at a peace campaign event in Mogadishu Nov 10. 2017 Photo/BRA Facebook Page
Muqdisho (XT) – Waa iska caddahay in dhallinyaradu tahay mustaqbalka Soomaaliya. Maxaa yeelay 75 boqolkiiba waa Dhallinyaro. Dhalinyarada ayaana ah waxa kaliya ee Soomaaliya ay abid yeelato oo ka qayb qaadan kara kor u kaca dhaqaallaha iyo horumarka dalka.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa marar badan muujiyay sida ay ugu heelan yihiin wadankooda, inkasta oo aysan helin taageerada dawladeed oo ay u baahnaayeen taa oo ka caawin laheyd in ay hormaraan. Sidaa darteed Soomaaliya waa in ay ka faaiideysataa dhallinayaradaan firfircoon oo u jiheysaa dhinaca horumarka.
Khudbadii ugu danbeysay ee uu, u jeediyay Maamulka Gobolka Banaadir, waxa uu madaxweyne Farmaajo si aan ka fiirsi laheyn uga hadlay doorka dhallinyaradu ay ka ciyaari karaan difaaca dalka.
Waa uu ku saxanyahay in uu ku celceliyo muhiimada uu leeyahay doorka dhallinyarada oo ah nabadeeyn, kaas oo ah kan kaliya ee isku xiraya shacabka, dawlada iyo waliba jiilalka danbe ee ii imaan doona.
Taas dhallinyarada Soomaaliyeed waa kaa dhaadhacsantahay oo waxa ay ka shaqeeyaan sidii nabad lagu gaari lahaa,iyaga oo maanka ku haya in waxa dhumaya ama khatarta wajahaya uu yahay musaqbalkooda oo mugdi sii galaya.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku hamiyaan Soomaaliya oo barwaaqo iyo nabad noqotay,si ay uga baxaan takoorka iyo uur ku taalooyinka ay ka mid tahay ku qaraqmida badaha shisheeye iyo jirdilka ay kala kulmaan magafayaasha aan diir naxeeyn.
Waxa ka dhigay khudabada madaxweynaha mid muran badan dhalisa ma aheyn diirada uu saaray mucaaradka aan wanaagsaneyn ee dawladiisa kaliya,ee waa baaqiisa ahaa dhalinyarooy qalinka dhiga ee qoriga qaata si aad ula dagaashaan Al-shabaab.
Inkasta oo ay waajib ku tahay muwaadin kasta oo Soomaaliyeed difaaca dalka iyo dadka,haddana su’aashu waxay tahay maxay ciidanka Amisom iyo kuwa Soomaaliya ee tiro ahaan ku dhaw afartan kun qabanayaan.
Waxaa taa ka wanaagsanaan laheyd haddii madaxweynuhu qiri lahaa muhiimada waxbarashada iyo waliba halganka ay ardaydu u maraan waxbarashada iyada oo ay maqantahay siyaasadii waxbarasho ama hey’adahii ku shaqada lahaa waxbarashada.
Madaxweynaha sida kuwii ka horreeyay ayuu ugu darsaday dhalinyarada waxyaabaha ahmiyada leh,laakiin siyaasadihiisa kama muuqato wax ka turjumaya arrintaas .In uu haddaba weydiiyo in ay qalinka dhigaan oo qoriga qaataan waxay noqoneysaa qar iska tuurnimo.
Madaxweyne Farmaajo hadda waxa uu wajahayaa cadaadis faro badan oo ah in uu wax ka qabto xaaladaha amni ee dalku wajahayo,wali se waxaa jira habab kale oo dhallinyaradu ay uga qayb qaadaan karaan nabad dhisida iyaga oo noqonaya askar rayid ah.
Arrinta dhallinyaro badan ka yaabisay oo aysan fileeyn ayaa ah in iyaga oo sidaa ugu heelan dalkooda, uu hal mar si lama filaan ah madaxweynuhu u yiraah qoriga qaata oo xooga saara dhinaca ciidanka, halkii uu dhihi lahaa sii wada waxbarashada nabadeeynta horseeda.Taa badalkeeda waxa ay filayeen in la siiyo shaqooyin ay ku rumeeyaan himilooyinkooda iyo tan dalka.
Xaalada amni ee Soomaaliya waa mid aad u adag, sidaa awgeed marna ma habboona in dadka dhan laga qayb galiyo dagaalka milatiri.Taasi waxay horseedi kartaa in la waayo kuwii bari hugaamin lahaa oo hagi lahaa ama kuwii ka shaqeyn lahaa nabadeeynta marka Soomaaliya nabad lagu soo dabbaalo.
Waxa Soomaaliya nabad ka dhigi kara waa ciidanka Amisom iyo kuwa qaranka oo shaqadooda si fiican u qabsada.
Mustaqbalkana waa in la helaa ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan, qalabeysan aadna u tababaran oo shaqada kala wareega ciidanka Amisom.
Dhalinyaradana si aysan u carqaladeyn horumarada la sameeyn doono waa in la kasbadaa quluubtooda iyada oo la siinayo fursado kala duwan oo ka dhigga kuwa awoodooda u adeegsada wax dhisid.
Dhallinyaro xirfad awood iyo hal abuur isku darsatay waa u muhiim dib u dhiska Soomaaliya xoog badan, bad qabta oo lagu faani karo. Waa ay fiicnaan laheyd in dawladu ay ficil u badasho hadalada af gobaadsiga ah oo ay marar badan ku hadlaan.
Previous articleGuddiga loo saaray arinta Qalbi-dhagax oo maalmo kooban loo qabtay
Next articleTurkiga: Waa wax lagu qoslo warka ka soo baxay kaaliyihii hore ee Trump